बसमा युवतीमाथि वीर्यपात गर्ने को हुन् ? बस प्रहरीको नियन्त्रणमा | इच्छा खबर |
बसमा युवतीमाथि वीर्यपात गर्ने को हुन् ? बस प्रहरीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं, १२ माघ । सार्वजनिक बसमा युवतीमाथि वीर्यपात भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले चासो देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोमा पछिल्लो सिटमा बसेका युवकले अघिल्लो सिटमा बसेकी युवतीको कपालमा वीर्यपात गरिहेको देखिन्छ ।
भिडियोमा युवक– युवती दुवैको अनुहार देखिँदैन । ती युवती आफूमाथि भइरहेको गतिविधिबारे अनभिज्ञ देखिन्छिन् । प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा घटनाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार युवतीमाथि अश्लील हर्कत भएको बा २ ख ९३२६ नम्बरको बस प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उक्त बस ढल्कुदेखि लगनखेल रुटमा चल्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेका छ ।